Ny Top 6 Things to do in Yukon, Kanada
Ny Faritanin'i Yukon any Kanada dia fantatra amin'ny toerana tsy misy azy, ary noho ny hatsarany mahafinaritra. Fialan-tsasatra ho an'ireo mpitsoa-ponenana avotra sy adrenalin, ary ho an'ireo izay miezaka ny mandositra ny tebitebin'ny tanàna. Avy amin'ny sidina fiaramanidina misesisesy mankany amin'ny fikarohana ny kolontsaina Voalohany ao amin'ny faritra, misy fomba arivo handany ny fotoanao any Yukon . Ireto ny enina amin'ireo zavatra tsara indrindra azonao atao amin'ny fialantsasanao any amin'ny sisintanin'i Kanada farany.
Ny lakandrano mahery vaika ao amin'ny faritra
Fiaramanidina eo amin'ny Reniranon'i Teslin. Jessica Macdonald
Ny lakandranon'i Yukon amin'ny ala sy ala kesika dia miampita amin'ny renirano. Tany am-piandohana, ireo renirano ireo dia lalam-baravaran-drano, manome ny fomba tsotra indrindra amin'ny fitaterana ho an'ireo mpifindra monina, mpivarotra ary mpihaza voalohany Nasionaly. Androany, ny renirano ihany koa dia manolotra ny iray amin'ireo fomba tena marina amin'ny fanandramana ny faritry ny faritra midadasika sy tsy misy dikany. Azonao atao ny manakaroka lakana avy amin'ny mpandraharaha toy ny Yukon Wild na ny Kanoe People (roa ao Whitehorse), na azonao atao ny manapa-kevitra hanao dia lavitra. Be dia be ny lalana azo aleha, ary misy ny renirano Yukon, ny Reniranon'i Teslin ary ny renirano Pelly.
Ny renirano tsirairay dia manana ny toetrany manokana - ny telo voalaza etsy ambony, ohatra, dia tsara indrindra ho an'ireo mpitsidika manan-tantara, ireo mpirotsaka an-tsehatra ary ireo fijerin'ny bibidia. Ny safidin'ny renirano rehetra, izay mivezivezy amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana an-dalamby, no fomba farany hampifandraisana ny zavaboary. Mandany ny andronao amin'ny fikorianan'ny haingam-pandeha haingam-pandeha efa main'ny ala mikitroka sy vatosokay. Amin'ny takarivam-panafody, ataovy ao anaty kirihitra ny toby miaraka amin'ny fitarainan'ny loon. Azonao atao ny mametraka ny fahaizanao miaina amina fanandramana amin'ny fanjonoana amin'ny alàlan'ny fanjonoana ho an'ny sakafonao amin'ny ala mikitoantoana sy ny famolavolana feno heniheny sy tariby; Fa ny biby dia hita matetika eny amin'ny renirano.
Mankao ny lalan'i Alaska
Raha te-handeha amin'ny fiara ianao, dia eritrereto ny dian'ny lalana mankany amin'ny alan'i Alaska Highway. Natao hampifandraisana ny US miaraka amin'i Alaska, ny fanorenana ny lalambe dia nanomboka tamin'ny taona 1942 nandritra ny haavon'ny Ady Lehibe Faharoa. Ankehitriny dia voatsodrano manontolo, dia mihazakazaka 1,387 miles / 2,232 kilometatra miala ny Dawson Creek any British Columbia mankany Delta Junction any Alaska. Ho an'ireo mpanao dia lavitra, ny Alaska Highway dia manome toerana mahafinaritra, tantara mahavariana ary ambonin'izany rehetra izany, ny fahalalahan'ny lalana misokatra. Misy teboka maro mahaliana amin'ny fitsidihana eny an-dalana, ka mahatonga ity làlana ity betsaka amin'ny dia lavitra amin'ny toerana.
Ny fijanonana any Yukon dia ahitana ny fizarazaran'ny kontinanta Amerikana, ny alan'ny alàlan'ny alàlan'ny Watson Lake ary ny Centre Inter interpretation Yukon Beringia ao Whitehorse. Ny Forest Signpost dia nanomboka tamin'ny taona 1942, raha nametraka soramandry ho an'ny tanindrazany any Illinois ny miaramila amerikanina mpiasam-panjakana iray miasa amin'ny arabe. Najanona ny fomban-drazana, ary ankehitriny ny "ala" dia ahitana famantarana maherin'ny 72 000 manerana izao tontolo izao, izay avelan'ireo mpanao dia lavitra manao fivahiniana masina eny amin'ny Highway Alaska. Ao amin'ny Center Interpretive Yukon Beringia, mianatra momba ireo biby izay nivezivezy avy any Siberia nankany Amerika Avaratra raha nisy tetezana iray nisy teo anelanelan'ireo roa nandritra ny Ice Ice farany.
Na mandeha lakana na fiara na fiaramanidina ianao, dia misy foana ny fahafahana manatona ny tontolon'ny biby any amin'ny faritra. Amin'ny lobaka mainty mihosin-dravina eny amoron-dàlana mankany amin'ny voromahery midedadeda, dia misy ny manantena ny tsy ampoizina amin'ny Yukon. Ho an'ny tsara indrindra, ho any amin'ny Kluane National Park, faritra voaaro amin'ny faritra atsimoandrefana izay manamora ny saha lehibe indrindra any Kanada sy ny tendrombohitra avo indrindra. Izy io ihany koa no mipetraka any Amerika Avaratra faran'izay malaza indrindra. Ny mpihaza hafa dia ahitana ny bera mainty, ny amboadia, ny coyotes ary ny lynx; Raha toa ka hita matetika koa ny karazam-biby tsy hita maso toy ny moose sy ny ondrin'i Dall.
Kluane koa dia safidy tsara ho an'ny vorona mpirenireny, manome trano ho an'ny karazany 150 samy hafa. Anisan'ireny ireo voromahery maitso sy marefo. Alefaso ny hizaha ny zaridaina mandritra ny fitsangantsanganana andro, na famandrihan-toerana andro maromaro na fitobiana.
Ireo izay tsy manam-potoana na teti-bola handehanana any Kluane dia tokony handinika fitsidihana ny Yukon Wildlife Preserve, izay misy dia 25 minitra avy any afovoan-tanànan'i Whitehorse. Eto dia ahitanao ny biby mampinono any avaratra andrefan'i Kanada ao anatin'io biby voajanahary io, nefa voajanahary, tontolo iainana. Ireo karazan-tsindrimandry hita ao dia karibouka raketa, ondry i Dall sy ny lynx Kanadiana, ary tsy misy toa an'i Kluane.
Fantaro ny History of Gold Rush
Ny Gold dia hita voalohany tamin'ny fidirana ao amin'ny Reniranon'i Klondike tamin'ny 1896. Talohan'io fotoana io dia mponina 5000 fotsiny ny mponina Yukon; Tamin'ny taona 1898, io isa io dia niroborobo niaraka tamin'ireo mpandinika sy mpangalatra volamena tamin'ny 30.000. Ny hala-tahaka tamin'ny Gold Klondike dia tsy ela, saingy; Tamin'ny taona 1899, maro tamin'ny mpikatsaka lova no nifindra tany amin'ny fanambarana vaovao tany Nome, Alaska. Na eo aza ny fahatafintohinany dia mbola miorina ao amin'ny kolontsaina Yukon ny Klondike Gold Rush-ary tsy misy any ankoatra any Dawson City. Tany am-piandohan'ny tobim-piaramanidina voalohany, ny tanàna dia nanjary ivon'ny hazakazaka volamena ary fantatra nandritra ny fotoana kelikely tany Paris ny Avaratra.
Na dia olona miisa 1 300 fotsiny aza no mijanona amin'ny 40.000 izay niaina tao Dawson City nandritra ny tampony, dia toerana mahafinaritra indrindra ho an'ireo mpizaha tany manantena ny hiaina ny andro fetin'ny Klondike. Tsidiho ny tranom-bakoky ny tanànan'i Dawson mba hahalalanao ny valisoa sy ny fahasarotam-pihetseham-pandresena goavana, ary koa ny fijerin'ny olona voalohany sy ny mpivarotra avy any Eoropa izay tonga teo anoloan'ny mpanaraka. Ao amin'ny Claim 33 Gold Panning, ianao dia afaka mianatra ny zavakanto amin'ny fandrindrana volamena ho anao manokana. Ny tantaran'i Gold Rush dia mihanaka koa any an-kafa. Ao Whitehorse, ny Museum MacBride dia manome fampiratiana maromaro momba io lohahevitra io, ary ny Reniranon'i Yukon kosa dia trano fialofana sy sambo volamena.
Soso-kevitra momba ny toerana sy toeram-ponenana
Raha mankany Dawson City ianao amin'ny lozam-pangonam-bolamena, makà antoka fa handefa fitsidihana amin'ireo barika malaza indrindra. Ny Diamond Tooth Gerties Gambling Hall dia sehatra fanatanjahan-tena mitazona karazana telo kanosa afaka aseho isaky ny alina hatramin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra. Ny Saloon Sourdough no malaza indrindra amin'ny Cocktail malaza Sourtoe -fisahan'i Yukon Jack whisky voaravaka akondro mummified olona. Ity fomban-drazana hafahafa ity dia niantomboka tamin'ny zotram-pihomehezana mpihazakazaka 1920, ary hatramin'ireo mpitsidika 71.400 ao amin'ny Dawson City dia nanala ny cocktail ary niditra tao amin'ny Club Cocktail Sourtoe. Soa ihany fa voarara ny sigara.
Ho an'ny sakafo bebe kokoa, dia andramo ny trano fisakafoan'i Klondike Rib & Salmon any Whitehorse. Misokatra amin'ny lohataona fotsiny ary atolotra ireo filaharana manodidina ny sakana, ity toerana malaza ity dia manompo ireo zavamaniry ao an-toerana manomboka amin'ny bislai bison any el stroganoff sy Alibiana. Ny Gold Pan Saloon eo akaikin'i Whitehorse ihany koa dia maneho fahatsiarovan-tsakafo Amerikana tsara sy mikraoba avy any Yukon Brewing. Azo alaina avy amin'ny fivarotana zava-maniry any Yukon izay mendrika ny sira, ny lantotr'ilay labiera dia ahitana lisitra iray mahavariana amin'ny labiera hafa miaraka amin'ny anarana fanta-daza toy ny Ice Fog, Lead Dog and Midnight Sun.
Manandramana ny Yukon amin'ny ririnina
Na dia betsaka aza ny trano fisakafoanana akaikin'ny ririnina sy ny asa toy ny lakana, dia misy antony maromaro hamangiana ny Yukon amin'ny vanim-potoana. Mipoitra matetika ny toetr'andro -22ºF / -30ºC, ary voafetra ny ora tara-maso androany (eo ambonin'ny faribolana Arktika, ny masoandro dia tsy mitsangana amin'ny solstice amin'ny volana Desambra). Na izany aza, ny ririnina dia miavaka ihany koa amin'ny andro mazava, andro manjavozavo, ary ny hatsaran 'ny tontolon'ny oram-panala sy ny ranomandry dia mahagaga. Andramo ny tananao amin'ny fisakafoanana snshoeing, na midira amin'ny fitsangatsanganana amin'ny ranomandry-miankina aminao amin'ny lafiny amin'ny karazam-biby toy ny trondro eny amin'ny farihy, Arctic grayling sy Arctic char. Azonao atao ny mividy fahazoan-dàlana alohan'ny aleha.
Ny Northern Lights koa dia hita any amin'ny faran'ny volana Aogositra ka hatramin'ny voalohandohan'ny volana Aprily, ary ny fiantsoana an'i Aurora Borealis nanolotra anao amin'ny toerana tsara indrindra mba hahitana ity trangan-javatra ity. Angamba ny fikomian'ny ririnina malaza indrindra amin'ny Yukon, na izany aza, dia ny fanangona alika. Na manoratra ora vitsivitsy ianao na mavesa-dàlana amin'ny andro maromaro, ny fandalovan'ny alika dia manome anao ny fahitana ny fifamatorana mahagaga eo amin'ireo alika sy ny mozikany. Raha te-hijery ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao am-piasana ianao, handehananao miaraka amin'ny Yukon Quest, ny hazakazaka miisa 1000 km avy ao Fairbanks mankany Whitehorse.
Kanada tamin'ny volana Jolay sy ny mpitsidika
Liquids any Canada: Volan'ny Common Metric
Best Golf Course any Ontario
Patriarika Nasionaly, Québec, Canada
Jereo ny Tombolita Tranainy any Cove Flower, Newfoundland
Ny zavatra mahasalama indrindra amin'ny fianakaviana ao Reno sy ny fanararaotana - Fizarana 1
Italiana ho an'ny mpivahiny any Italia
Toeram-pisakafoanana isan-kerinandro momba ny fandaniam-bola ho an'ny Massachusetts
Torolalana amin'ny Harvey Theatre ao amin'ny Brooklyn Academy of Music
Mandondona (per) Miala any amin'ny sekolin'ny Mermaid Caribbean any Anguilla
Ny Tranobe faha-16 tao amin'ny Phoenix Open
Ahoana no nahitan'i Charlotte, NC ny anaran'ny "Queen City"?
Lava ny Riviera frantsay any Rivea ao Delano Las Vegas
Ny zavatra tsara indrindra atao any Shenzhen
Ny tari-dalana manan-danja ho an'ny toeram-ponenan'ny Mountain Ski Okemo
Andron'ny Bastille any San Francisco